Maley (vahoaka) - Wikipedia
Ny Maley na Malay dia ireo vahoaka aostrôneziana ao amin' ny morontsiraka atsinanana ao amin' ny nosy indônezianan' i Somatra, ny nosy Riau, izay indôneziana koa, ao amin' ny alanan' ny nosy Bôrneô, ao amin' ny saikanosin' i Malezia, nhy saikanosin' i Singaporo ary ny tapany atsimon' i Tailandy (faritanin' i Yala, Pattani, Narathiwat ary Songkhla) izay mampiasa fiteny aoamin' ny vondrom-piteny atao hoe "maley". Na dia izany aza dia ny fitenenana ny fiteny iray ao amin' ity vondrona ity dia tsy ampy haha Maley ny olona iray. Mazava izany raha ny momba ny mpiteny sokajina hoe Trade Malay (fiteny maley ampiasaina amin' ny raharaham-barotra). Ny vahoaka mpiofanolo-bodirindrina amin' ny Maley - toy ny Minangkabao amin' ny tapany andrefan' i Somatra na ny Mosy (Musi) aop amin'ny faritr' i Palembang amin' ny tapany atssimon' i Somatra - dia tsy manao ny tenany ho Maley (izay voambolana manondro nhy maha izy ny vahoaka iray).
Ireo andriandahy tao amin' ny soltanatan' i Deli, Langkat et Serdang tamin' ny vanim-potoan' i India Neerlandey.
Amin' ny fiteny maley dia tao hoe Orang Melayu ny foko na vahoaka maley.
Tsara anterina koa fa tsy ao amin' ny saikanosin' i Malezia ihany (izay tsy tany niavian' ny Maley) no onenan' ny Maley, Ny teny hoe Malayu dia manondro ny fanjaka-panjaka tao atsinanan' i Somatra.
Ny anarana hoe Malezia (Tanah Melayu), amin' ny fomba fijery maleziana, dia tsy manondro afa-tsy ny tapany maleizianan' ny saikanosin' i Malacca. Amin' ny teny frantsay, ny hoe Malaisie dia manondro koa ny federasiona (Persekutuan Malaysia), izay ahitana koa ny Fanjakan' i Sabah sy Sarawak ao amin' ny tapany avaratr' i Bôrneô (ny anarana an-toeran' ny federasiona dia Malaysia). Ny anarana hoe Malezia dia avy amin' ny andian-teny anglisy hoe British Malaya izay noforonina tamin' ny taonjato faha-19 mba hanondroana ireo soltanata tao amin' ny saikanosy teo ambany fiarovana britanika, sady mba hanavahana azy amin' ireo soltanata maley tao Somatra sy tao amin' ny tapany atsimon' i Bôrneô, izay nofehezin' ny Neerlandey.
Ny fiteny maleyHanova
Ny fiteny malay na fiteny maley dia fiteny aostrônezianina izay tenim-pirenen' i Malaizia, Indônezia ary Boroney. Anisan' ny teny ôfisialin' i Singapaoro ihany koa ilay fiteny. 40 tapitrisa ny isan' ny olona mahay miteny malay, izay hita eo amin' ny manodidina ny andilan-dranomasin' i Malacca sy ny morontsiraky ny nosy Bôrneô ary ny faritra atsinanana ao Somatra. Noho ny sata ôfisialiny dia mahery ny 200 tapitrisa ny isan' ny olona mahay miteny malay (raha isaina ao anatin' izay ireo olona mahay miteny indônezianina).
Saikanosin' i Malezia
Saikanosin' i Somatra
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Maley_(vahoaka)&oldid=1000123"
Dernière modification le 11 Janoary 2021, à 08:25
Voaova farany tamin'ny 11 Janoary 2021 amin'ny 08:25 ity pejy ity.